Google Mepu inogadziriswazve nedzimwe nhau | IPhone nhau
Google Mepu inogadziriswazve nedzimwe nhau
Google inoenderera mberi nekuvandudza kuwedzera maficha ekushandisa kwayo kweIOS, mamwe acho achigere kuwanikwa mune yayo Android vhezheni. Makambani makuru seGoogle neMicrosoft ane chinyoreso che tanga kuvhura mafomu uye mashandiro matsva papuratifomu yemukwikwidzi kuitira kuti uwedzere huwandu hwevashandisi.
Panyaya yeGoogle Mepu, inofanirwa kutakurwa mupfungwa kuti Apple Mepu zvishoma nezvishoma inova inopfuura imwe chaiyo nzira kuGoogle Mepu, kunyanya munyika umo masevhisi ese anopihwa nekambani anowanikwa senge ruzivo rwekutakura kwevanhu, izvo zvinotibvumidza kufamba nzendo tichitenderera guta tisingashandise tekisi kana yedu mota uye izvo nhasi zvinongowanikwa mumaguta makumi matatu.
Mushure meiyi nyowani nyowani, Google yakavandudza mashandiro ezwi patinoishandisa kufamba, iyo nyowani yekufambisa izwi kudhiraivha inotibvumidza isu kunyarara, kumisikidza ruzha kana kumisikidza chete kurira kweyevero. Asi zvakare nekuda kweichi chiitiko, Google Mepu inotibvumidza kuwana iyo panoramic photo gallery yenzvimbo yatakawana senzvimbo yekuenda kunotora zvishoma tisati tasvika.
Chii chitsva muGoogle Mepu mushanduro 4.19.0
Izwi idzva rinodzora mukutenderera kuti mbeveve, nyarara kana kumisa chete kurira kweyevero.
360 degree panoramic maonero mune iyo foto gallery kana isu tichida kuona kwatinosvika kwatiri kuenda.
Pfupiso iri pa «Peak maawa» girafu haitibvumidze kuti tikurumidze kuziva kana nzvimbo yatinoda kupfuura yakabatikana kana kana zvichipesana zviri pachena kuti kune traffic kana iri fluid chaizvo.
Kugadziriswa kwezvikanganiso zvidiki uye zviputi.
Google Mepu inowanikwa kuti utorwe mahara paApp Store. Inoenderana neiyo iPhone, iPod, iPad uye Apple Watch. Zvekushanda kwayo zvinoda zvirinani iOS 7.0 kana kupfuura.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Google Mepu inogadziriswazve nedzimwe nhau
EU inozivisa nezve Xiaomi zvigadzirwa zvinobata moto
Nakidzwa neako iPad wakasununguka neichi chirevo chakataurwa